Bogga ugu weyn Dib u eegisyada Software-ka Cashuuraha ATX 2021
Iyada oo ay jiraan waxyaabo badan oo door ah oo laga soo dooran karo, xulashada software-ka saxda ah ee diyaarinta cashuuraha waxay noqon kartaa waqti aad u badan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad aqoon u leedahay cashuuraha macmiilka iyo sifooyinka looga baahan yahay si ay u daboolaan baahiyahooda, waxa laga yaabaa inaad ku hagi karto dariiqa saxda ah.
Software-ka cashuuraha ATX, oo ah badeecada Wolters Kluwer, waa mid ka mid ah softiweerka cashuuraha xirfada leh ee ay isticmaalaan diyaariyayaal badan oo cashuuraha aduunka oo dhan. Iyada oo leh dashboard-keeda is-dhexgalka iyo noocyo kala duwan oo foomamka loo baahan yahay si loo xareeyo canshuurta, software-ku waa fududahay in la isticmaalo.
Dib-u-eegidda software-ka cashuuraha ATX, waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka khuseeya ee aad uga baahan tahay software-ka.
Waa maxay ATX?
ATX Tax Software Features
1. Interface Isticmaalaha Garaaf ahaan
2. Maktabada Foomamka U Hogaansanaanta Cashuuraha
3. Software-ka Wareysiga
4. Cashuur -diyaariyaha
5. Kaydka macluumaadka
6. Soo celinta iyo soo celinta xogta
7. Warqadaha macaamiisha
Faa'iidooyinka ATX Tax Software
1. Foomamka Maktabada leh Range Balaadhan
2. Interface ah in ay fududahay in la isticmaalo
3. Qalabka lagu sameeyo waraysiyada iyo samaynta hubinta taariikhda
4. Platform for Multi-Tasking
5. Kaalmo Gaar ah
Faa'iidooyinka Isticmaalka ATX Tax Software ee Cloud
ATX waa barnaamijka diyaarinta canshuur celinta. CPA-yada, yar xisaabaadka shirkadaha, xisaabiyeyaasha madax-bannaan, iyo kooxaha maaliyadda ganacsiga waxay isticmaali karaan Wolters Kluwer's CCH Adeegyada Yaryar ee Firm si ay u abuuraan xal miiska oo ay ku jiraan maktabadda foomamka u hoggaansanaanta canshuurta.
Ganacsatada, ganacsatada, iyo xisaabiyeyaasha waxay ku kalsoonaan karaan inay heli doonaan dhammaan foomamka ay u baahan yihiin si ay ugu hoggaansamaan shuruucda heerarka oo dhan iyadoo ay ugu wacan tahay ATX. ATX waxa kale oo lagu dari karaa maaraynta ku-dhaqanka iyo qalabka cilmi-baadhista sharciga cashuuraha si loo abuuro xidhmo software oo dhamaystiran. Isticmaalayaashu waxay yeelan karaan qulqul shaqo oo aan kala go 'lahayn dhammaan walxaha maamulka canshuurta taas ayaa keentay.
Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah sifooyinka software-ka cashuuraha ATX ee ka duwan software-yada kale ee cashuuraha:
Barnaamijka ATX waxa uu leeyahay adeege-saaxiibtinimo interface kaas oo u ogolaanaya in si fudud loo maro. Interface-ka ATX waxa loo dejiyay si ay diyaariyayaashu ugu shaqeeyaan saddex nooc oo kala duwan isku mar. Interface-ku waa mid dareen leh oo bixiya dareenka buuxinta foom jireed, sidaa darteed waxaa isticmaali kara diyaariyayaal cashuureed oo xilliyaysan iyo kuwa aan khibrad lahayn.
Intaa waxaa dheer, tilmaamaha IRS si degdeg ah oo diyaar ah ayaa loo arki karaa iyada oo la socdo wax yar. Uma baahnid inaad raadiso xulashooyin markaad isticmaalayso software-ka ATX sababtoo ah calaamadaha qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan, sida Wareysiga, CCH iFirm, iyo Check Return, ayaa si muuqata loogu soo bandhigay aaladda.
Software-ka cashuuraha xirfada leh ee ATX waxa uu leeyahay maktabad weyn oo dawlad-goboleed, mid deegaan, iyo foomamka cashuuraha federaalka. Maktabadu waxay ka kooban tahay foomam sida 1040, 1040NR, 1065, 1041, 1065, iyo 1120. Foomamka takhasuska ee kala duwan, sida 5500, 706, 709, iyo 990, ayaa sidoo kale lagu daray. Cashuur diyaariyayaashu waxay ka faa'iidaystaan ​​maktabadda mar haddii ay ka heli karaan dhammaan waxay u baahan yihiin hal meel, taasoo keentay in la xareeyo cashuurta oo hufan.
Post laxiriira: Faallooyinka Canshuur -qaadaha 2021: Faylka Canshuuraha ee ugu Fiican Online ama Fadeexad
Hawsha waraysigu waa mid ka mid ah software-yada cashuuraha ATX ee ugu gaarka ah iyo sifooyinka isdhexgalka. Waxa ay u ogolaataa diyaariyayaasha cashuurta in ay ku buuxiyaan cashuur celinta qaab waraysi. Macluumaadka waxaa si toos ah loogu buuxinayaa foomka canshuur celinta dhabta ah marka diyaariyaha uu buuxiyo soo celinta macmiilka foomka wareysiga. Intaa waxaa dheer, haddii macluumaadka uu bixiyo diyaariyaha ay qasab ka dhigto isticmaalka foom gaar ah, si toos ah ayaa loogu daraa xaashida wareysiga.
Si aad u isticmaasho sifada waraysiga, aad bar-kulanka oo dhagsii badhanka waraysiga.
Qalab kale oo faa'iido leh waa Abaabulaha Canshuuraha, kaas oo u oggolaanaya diyaariyeyaasha canshuuraha in ay ku daraan macluumaad dheeraad ah si ay u furaan foomamka canshuurta qaab waraaqo shaqo. Waxaad macaamiisha waydiisan kartaa dhammaan macluumaadka ay uga baahan yihiin canshuur celinta sanadkan, iyo sidoo kale inaad cusbooneysiiso macluumaad kasta oo ku saabsan soo celinta sannadkii hore, sida ciwaanka ama tirada dadka ku tiirsan ee ay haystaan.
Haddii aad rabto inaad u keento macaamiishaada xaashi shaqo oo aad u ballaadhan, waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka qabanqaabiyaha oo dhammaystiran. Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad u soo dirto macaamiisha Warqad Abaabule ama Warqad Hawlgelin ah.
Guji foomamka> Abaabulaha> Ku dar Abaabulaha si aad ugu darto qabanqaabiyaha soo noqoshada.
Dhammaan weydiimaha la xidhiidha ATX, oo ay ku jiraan habsocodyada iyo habaynta, waxa lagaga jawaabay saldhigga aqoonta ATX. Waa hab degdeg ah oo fudud oo ay macaamiishu ku heli karaan caawimo dhibaatooyinka software-ka ATX.
Markaad gasho Xarunta Xalka ATX, waxaad geli kartaa saldhigga aqoonta. Waxaa jira ikhtiyaar maktabad aqooneed halkaas. Dhammaan alaabooyinka ATX, oo ay ku jiraan ATX Advantage, faylka ATX, iyo ATX PRS, waxay ku jiraan maktabadda aqoonta.
Kaliya dooro badeecad kasta oo aad jawaabaha ugu baahan tahay oo ku qor ereyga raadinta. Dhammaan raadinta ku xidhan weydiintaada waa la tusi doonaa. Waxa kale oo aad hoos u dhigi kartaa raadintaada mawduuc ahaan (Documentation, FAQs, xallinta dhibaatada, sida loo sameeyo).
Xulashada kaydinta xogta ee barnaamijka ATX waxay ilaalinaysaa dhammaan xogta muhiimka ah ee cashuuraha. Cashuur celin kasta si toos ah ayaa loo kaydiyaa isla marka uu si caadi ah u xidhmo. Intaa waxaa dheer, macluumaadka Shirkadda, Bixiyaha, biilasha, iyo Diyaariyaha/ERO si toos ah ayaa loo xoojiyaa.
Si aad u furto daaqada kaabta, u gudub Preferences> Backup and Files. Waxaad cayimi kartaa kaydka iyo meelaha sare, iyo sidoo kale dami ikhtiyaarka kaabta Automatic, ee daaqada kaabta.
Diyaariyayaashu waa inay la xiriiraan macaamiisha si ay u helaan macluumaadka ku saabsan canshuur celintahooda. Software-ka cashuuraha xirfada leh ee ATX waxa uu u ogolaadaa diyaariyayaasha cashuurta in ay u habeeyaan xarfaha macmiilka sida ay rabaan. Waxa kale oo aad ka dooran kartaa mawduucyo kala duwan oo horay loo sameeyay oo aad shakhsiyayso si aad u jeceshahay.
Tag Dookhyada> Isgaarsiinta macmiilka si aad u hesho xarfaha macmiilka.
Waxaad kala dooran kartaa noocyada xarfaha kala duwan iyo foomamka (State/ Local, Federal) kuwaas oo aad rabto in xarfaha lagu soo diro daaqadda Isgaarsiinta Macmiilka. Waxaa jira xulashooyin badan oo badan, sida cabbirka farta, nooca farta, iyo xulashada cutubka.
Halkan waxaa ah dhowr faa'iidooyin oo ah software-ka canshuurta ATX
Xisaabiyeyaasha waxay isticmaali karaan ATX si ay u helaan dhammaan foomamka looga baahan yahay u hoggaansanaanta canshuurta. Maktabadda xalku waxay leedahay in ka badan 7,000 foom, taas oo u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay si dhakhso ah oo fudud u dhammaystiraan dukumeentiyada. Kheyraadkan ballaaran ayaa sidoo kale ka caawiya xisaabiyeyaasha si ay u buuxiyaan shuruudaha canshuurta gaarka ah ee macaamiishooda ama shirkadahooda.
Isticmaalayaashu waxay filan karaan madal u oggolaanaysa inay si fudud u dhex maraan beeraha iyo inta u dhaxaysa ilaa saddex nooc. Sababtoo ah ATX waxaa loogu talagalay inay u ekaato soo celinta caadiga ah, waxay si fudud u isticmaali karaan barnaamijka.
ATX waxa ku jira qalab waraysi oo ku haga isticmaalayaasha tilaabo kasta oo habka buuxinta foomka waafaqsan. Tani waxay dammaanad qaadaysaa in isticmaalayaashu ay si sax ah u buuxiyaan dhammaan meelaha loo baahan yahay. Waxa kale oo ay badbaadin karaan wakhtiga qiimaynta galitaanka goobta sababtoo ah software-ku waxa uu si toos ah u ansixiyaa xogta la galiyay ee khaladaadka iyo gafafka. Xisaabiyayaashu waxay hubsan karaan in foomamkoodu yihiin kuwo sax ah oo waafaqsan habkan.
Hawlaha badan waxaa taageera ATX xisaabiyeyaasha u baahan inay u kala beddelaan qaabab kala duwan. Ilaa saddex foom oo soo celinta furan ayaa loo oggol yahay is dhexgalka, oo leh bog kala duwan, xaashi shaqo, iyo tabs foomka u oggolaanaya isticmaaleyaasha inay si dhakhso ah u dhex maraan noocyada kala duwan ee foomamka. Tani waxay u ogolaanaysaa e-fiyeyaasha inay buuxiyaan foomam badan iyo kor loogu qaado wax soo saarkooda.
Akhri ALSO: 15ka Siyaabood ee Ugu Sareeya ee Go'aano Wanaagsan lagu Gaadho
Macaamiisha ATX waxa laga yaabaa inay ku kalsoonaadaan inay heli doonaan kaalmada ay u baahan yihiin. Xisaabiyayaashu waxay isticmaali karaan maktabada aqoonta internetka ee software-ka mar kasta oo ay la kulmaan caqabado farsamo oo soo noqnoqda. Waxa kale oo ay helayaan wargeysyo joogto ah, qalab-caawiye, iyo qalabyada kale ee wax-soo-saarka (iyadoo ku xidhan qorshahooda is-diiwaangelinta) kuwaas oo ay ka faa'iidaysan karaan si ay u kordhiyaan fahamkooda alaabta iyo codsiyadeeda.
Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka software-ka ATX Tax-ku-saleysan:
1. Meel fog laga galo
Iyadoo ATX Cloud Hosting, waxaad isticmaali kartaa laptop, desktop, tablet, ama smartphone si aad meel kasta uga gasho.
Waxa ay ku siinaysaa awood aad iskaga ilaaliso shabakada deegaanka. Sababtoo ah software-ku wuxuu ku rakiban yahay oo ku shaqeeyaa kombuyuutarrada waxqabadka sare leh, mid ka mid ah faa'iidooyinka aasaasiga ah ee ATX Cloud hosting waa jawaabta degdegga ah ee internetka.
2. Shuruudaha Hardware Hoose
Markaad ku martigeliso software-ka cashuuraha ATX daruuraha, waajib kuma aha inaad samaysato taageeradaada IT-ga; halkii, waxaad heli doontaa adeeg bixiyahaaga adeeggiisa.
Waxa laga yaabaa inaad ku socodsiiso codsigaaga ATX shabakad gudaha xafiiska ah adoon bixin lacag qalabka lagama maarmaanka ah. Intaa waxaa dheer, shirkaddaada martigelinta ee ATX waxay hubin doontaa inaad hesho wax casriyeyn ah isla marka la helo.
3. Xog kasta waa la heli karaa daqiiqad kasta
ATX Cloud hosting waxa ay fududaynaysaa wada shaqaynta iyada oo u ogolaanaysa xisaabiyeyaashaada, shaqaalahaaga, ama CPA-yada meelo kala duwan in ay isla mar ahaantaana helaan xog isku mid ah. Waxa kale oo loo isticmaali karaa iyada oo lala kaashanayo Kombuyuutar Virtual Hosted ah. Qof kastaa wuxuu isku dayi karaa inuu helo natiijooyin wanaagsan oo uu noqdo mid wax soo saar badan isku mar.
Hay'adaha xisaabaadka, faylka iyo amniga xogta ayaa shaki la'aan muhiim u ah. Wax kasta oo jebinta amniga xogtu waxa ay ku dhici kartaa natiijada gudbinta xogta aan la hubin ee shabakada ama kaydinta cilad.
Software-ka ATX ee martigeliyay wuxuu hubinayaa in xogtaada loo hayo sida ugu ammaansan ee suurtogalka ah. Dhamaadka-ilaa-dhamaadka sirta ah, xaqiijinta arrimo badan, nidaamka ka-hortagga, ogaanshaha faragelinta, dab-damiska, iyo sifooyinka kale ee amniga xogta ayaa laga heli karaa bixiyeyaasha martigelinta ee ATX ee sumcadda leh, iyo sidoo kale dhowr kayd.
5. Mas'uuliyadaha Maareynta IT waa la dhimay
Milkiilayaasha ganacsiga yaryar waxay diiradda saari karaan hawlahooda ganacsi ee muhiimka ah halkii ay ka ahaan lahaayeen software-ka taageera iyaga oo dibadda u soo saara maamulka iyo kontoroolka dhismaha ee software-ka ATX.
Sababtoo ah marti gelinta daruurtu waxay ogolaataa gelitaanka fog, waad wada shaqayn kartaa, la socon kartaa, oo aad la socon kartaa ficiladaada ka dib marka dibadda laga soo saaro.
Intaa waxaa dheer, martigelinta software-ka ATX waxay yaraynaysaa tirada dadka looga baahan yahay inay maamulaan oo ay ka shaqeeyaan qalabka dhismaha, adeegayaasha, iyo shabakadaha.
Markay timaaddo Xafiiska 365 Kiraystaha Socdaalka Kiraystaha iyo adeegga macaamiisha gaarka ah, Apps4Rent ayaa ah kan ugu wanaagsan bixiyeyaasha adeegga socdaalka.
Akhri ALSO: 10 Dariiqo oo ku Saabsan Sida Loo Bixiyo Canshuur Yar 2021 | Sirta Gudaha
Shuruudaha Nidaamka ee ATX
Waxaad u baahan doontaa xal xirfadle ah oo jaangooya, otomaatig ah, oo hagaajiya hababka cashuuraha iyo socodka shaqada haddii aad tahay diyaariye cashuureed ama shirkad yar. ATX Tax Preparation Software waa barnaamij cashuureed dhamaystiran oo saaxiibtinimo ku leh oo loo sameeyay xisaabiyayaasha dawliga ah (CPAs) iyo ganacsiyada yaryar. Waxay haysaa qalab kaa caawinaya inaad sugto, maamusho, oo aad horumariso shirkaddaada. Qayb gaar ah oo software iyo hardware ah ayaa lagama maarmaan u ah in lagu rakibo loogana faa'iidaysto ATX goobta shaqada ee degaanka ama serverka. Maqaalkan, waxaan uga hadli doonaa.
Shuruudaha Nidaamka Shaqada ee ATX Tax Software
ATX Tax Software waxaa lagu rakibaa kumbiyuutar kasta oo buuxiya shuruudaha ugu yar ee nidaamka. Habayn kale, si kastaba ha ahaatee, ayaa lagu talinayaa in si fiican loo qabto. Kuwa soo socdaa waa liisaska qalabka iyo qaybaha software ee loo baahan yahay si loo dejiyo software-ka oo loo helo natiijooyinka ugu fiican goobta shaqada.
In kasta oo ATX Tax Software ay rakibi doonto oo ay ku shaqayn doonto qaabayntan, isticmaaleyaasha qaar ayaa laga yaabaa inay ogaadaan in waxqabadkeedu ka hooseeyo filashooyinka.
Windows 8.1 32-bit ama 64-bit nidaamka hawlgalka
Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, ama processor u dhigma
4 GB RAM, 3 GB Hard Disk Space
1024×768 pixels waa xallinta bandhigga.
Google Chrome ama Microsoft Edge waa labada shabakadood ee ugu caansan.
Shuruudaha Nidaamka ee lagu taliyay
ATX Tax Software waxay ku shaqayn doontaa sida ugu wanaagsan ee qaabkan, gaar ahaan isticmaalayaasha soo xareeya soo celinta adag ama diyaariya tiro badan oo soo celin ah.
Windows 10 32-bit ama 64-bit nidaamka hawlgalka
Intel Core i7 ama processor ka dhakhso badan
xallinta 1920 x 1080 pixels
Waa imisa qiimaha ATX?
Qorshayaasha Qiimaha ATX: Trial Free
Soo-celinta ATX - $ 529.00
Xidhmada ATX 1040 - $669.00/bixin hal mar ah
Xidhmada ATX Max - $1,579.00/bixin hal mar ah
ATX Wadarta Xafiiska Canshuuraha - $1,579.00/bixin hal mar ah
ATX Faa'iidada - $3,949/bixin hal mar ah
FAQs On ATX Tax Software Reviews
Waa maxay luqadaha uu ATX taageera software-ka?
Software-ka ATX wuxuu taageeraa luqadda Ingiriisiga.
Adeeg noocee ah ayay ATX bixisaa?
ATX waxay bixisaa caawimo onlayn ah.
ATX miyay la midaysaa codsiyo ama adeegyo kale?
OmniConnect, QuickBooks Online, iyo SmartVault waa dhammaan isku-dhafka ATX.
Waxbarasho noocee ah ayay ATX bixisaa?
ATX waxay keentaa dukumeenti ahaan nooc tababar ah.
Immisa ayuu ATX dib kuu dhigayaa?
ATX waxay leedahay qiimihii bilawga ahaa $597.
ATX waa barnaamij canshuureed awood leh oo ay ku jiraan dhammaan howlaha looga baahan yahay nidaamka xereynta canshuurta. Martigelinta ATX ee daruuraha, kaliya ma wanaajiso shaqadeeda laakiin sidoo kale waxay ku kordhisaa dabacsanaanta daruuraha. Helitaanka fog, xogta cashuur dhaafka ee bilaa dhibka ah, iyo korodhka ilaalinta xogta ayaa ah dhawr ka mid ah faa'iidooyinka kaydinta software ATX ee daruuraha.
Haddii aad waligaa lahayd caado xun, waxaad isku dayday inaad ka gudubto, waxaad ogaan doontaa inta…
NFL (National Football League) waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan dalka Mareykanka…